Spain oo doobabka reer miyiga ah loo raadinayo dumar ay guursadaan | Saxil News Network
Image captionHayaanka jacaylka
Dalka Spain waxa uu heer aad u hooseeya uga jiraa dib u deegaameynta miyiga marka la barbar dhigo dalalka kale ee midowga Yurub. Muddo tobannaan sano ka badan ayey dadka reer miyiga ah kasoo guurayeen baadiyaha, iyagoo magaalooyinka u doonanayay shaqooyin. Dadka looga soo tagay tuulooyinka miyiga waxay u badnaayeen waayeello – ama rag iskaabulo ah oo ka shaqeysta beer falashada iyo xoolo dhaqashada. Marka sidee buu qofka xoolaleyda ah ee cidlada ku haray ku heli karaa jacayl?
Antonio Cerrada oo 52 sano jir ah waa nin xoolaha dhaqda oo ku nool Cooshado la dhisay waa hore oo uu ku leeyahay tuulada Pradena de Atienza oo ku taalla dooxo hoosteed.
Sida ay ku timid maalinta Jacaylka adduunka ee “Valentine’s day”
Halkan ayuu noloshiisa oo idil ku qaatay isagoo xoolihiisa xannaaneysanaya.
Isla sida aabihiis iyo awowgiis oo ka horreeyay, maalintii oo dhan wuxuu ku mashquulsan yahay arigiisa iyo beertiisa oo ay iskala shaqeeyaan walaalkiis.
Lahaanshaha sawirkaESPERANZA ESCRIBANO
Image captionAntonio wuxuu ka shaqeeyaa xannaanada beertiisa iyo xoolihiisa
Antonio gurigiisa wuxuu masaafe 2 saacadood iyo bar kaliya loo kala socdo u jiraa magaalada caasimadda ah ee Madrid, laakiin maadaama ay u dhaxeeyaan buuro iyo dhul baraf ah, waxay u muuqdaan iney aad u kala fog yihiin.
“Haddii aniga iyo walaalkey aannaan dhabar adeygi lahayn, tuuladan xilli hore ayaa la dayici lahaa”, ayuu yidhi.
Dad ka yar 10 ruux ayaa sannadka oo dhan ku nool tuulada Pradena de Atienza.
Antonio wuxuu arkay qoysas badan oo daris la ahaa iney magaalooyinka u guureen, si ay nolol cusub u raadsadaan.
Isagu waligiis ma uusan dooneyn inuu ka tago halkaas, balse waxaa muddo dheer ku dhacday lamaane la’aan.
Markii uu 30 sano jir ahaa ayuu billaabay inuu raadsado haweeney uu guursado, taasoo dabcan aan oggolaaneyn in ay ku noolaato meel aan waxba dhaamin saxare.
Arrin sahlan ma ahayn.
Image captionTuulooyinka waxaa looga tagay dad waayeello ah iyo rag iskaabulo ah
“Waxaa jiray barnaamij ka baxayay Telefishinka – oo uu ciwaankiisu ahaa Beeraley raadinaya xaas, ama wax saas lamid ah. Telefishinka ayuu barnaamijkan ka socday maalintii Talaadada. Waxaan rabay inaan ka qeyb galo barnaamijkaas”, ayuu yidhi.
Taasi ma dhicin. Ka dib Antonio wuxuu maqlay sheeko ku saabsan Hayaan dumar ah – ama Hayaan jacayl ah, sida mararka qaar loo yaqaannayba.
Kani waa mashruuc isdhexgal ah oo haween iskaabulo ah looga soo kaxeeyo magaalada Madrid, kuwaasoo lala kulansiiyo ragga aan xaasaska lahayn ee ku nool miyiga.
Waxaa loo sameeyaa munaasabado casho iyo qoob ka ciyaar ah.
Manolo Gozalo iyo lamaanihiisa Venecia Alcantara, ayaa arrintan ka shaqeynayay tan iyo sannadkii 1996-kii.
Image captionManolo wuxuu hubinayaa dhigidhada
Lamaanahan qudhooda waxaa suurta gal ah iney arrintan si aad ah ula dhacsan yihiin, maadaama labadooduba ay iska heleen mid ka mid ah hayaannadii ugu horreeyay ee uu billaabay Manolo.
“Waxaan qaban qaabinay qiyaastii 600 oo hayaan ilaa hadda… waxay ila tahay in 180 lamaane ay sidaas awgeed ku sameysteen xiriir. Dabcan kulligood iskuma waarin laakiin qiyaastii 100 lamaane ayaa wali isla jooga”, ayuu yidhi Manolo.
Image captionVenecia Alcantara waxay isku diyaarineysaa madadaalo
Markii uu Antonio ogaaday in bas wada hayaanka jacaylka uu imaanayo makhaayad ku taalla tuulo u dhow deegaankiisa, howshiisii oo dhan wuu iska soo daayay wuxuuna soo aaday goobtii.
Maria Carvajal, oo ah haweeney kasoo jeedda Colombiya oo ku nooleyd caasimadda ayaa ahayd qofkii ugu dambeeyay ee kasoo dagay baska.
“Dhammaanteen waan ciyaareynay, balse Antonio aniga ayuu i eegayay, marka waxaan ku idhi, ‘ma rabtaa inaad ciyaarto?’ wuxuu ii sheegay inuusan aqoonin sida loo ciyaaro… sidaas darteed waan iska fariistay mar kale. Laakiin isagu ma uusan ka daalin inuu isha igu hayo! Sidaas ayey markii ugu horreysay ku billaabatay arrinteenna”, ayey tidhi.
Markii cashada loo fariistay, Antonio iyo Maria isku miis ayey soo fariisteen, way sheekeysteen kadibna waxay billaabeen inay isla ciyaaraan.
Waxay ku ballameen iney kulmaan, Antonio ayaana Maria ku casuumay iney isbuuca dabayaaqadiisa ku booqato tuuladiisa Pradena de Atienza.
Antonio wuxuu aad ugu farxay in Maria ay durba aqbashay tuulada maran, laakiin gabadha qudheedu maadaama ay muddo 10 sano ah Madrid uga shaqeyneysay dhinaca nadaafadda, waxay dooneysay isbaddal dhinaca nolosha ah.
Image captionMarkii ugu horreysay ee ay Atnonio iyo Maria kulmeen
Tuulooyin badan oo ku yaalla miyiga dalka Spain waxaa ka jira dhibaatooyinka noocan ah, ragguna ma helaan haween ay guursadaan.
Meelaha qaar, ilaa 1,300 oo tuulo ayey ku nool yihiin dad aan ka badneyn 100 ruux oo kaliya.
Laakiin dadka sameeya hayaanka jacaylka ayaa arrintan kala kulmay cambaareyn xoog leh.
Dadka aan la dhacsaneyn ficilkooda ayaa ku dhaliilay in haweenka ay u daabulayaan tuulooyinka, si ay rag ugu farxad galiyaan, ay tahay xad gudub loo geysanayo dumarka